Israel inozivisa hurongwa hwekuvakazve kuvaka
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Kuputsa Israel Nhau » Israel inozivisa hurongwa hwekuvakazve kuvaka
nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Israel Nhau • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Investments • nhau • vanhu • Kuvakazve • Resorts • Kutarisirwa • ushanyi • Tourism Kutaura • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Israel inotangisa chirongwa chekuvaka patsva uye kutangazve nyika yakarohwa indasitiri yekushanya
Kushanya kweIsrael kwakakanganiswa zvakanyanya nenjodzi yeCOVID-19
Chirongwa chinosanganisira mushambadziro wepasi rose wekushambadzira kukurudzira vashanyi vekunze kushanyira Israel
Ndege dzepasi rese kuenda kumaodzanyemba kweRed Red resort guta reEilat kutangazve
Israel Ministry of Tourism yakazivisa kuti yatanga chirongwa chekuvaka patsva uye kutanga zvekare indasitiri yakarohwa yekushanyirwa yeIsrael, iyo yakakanganiswa zvakanyanya nenjodzi yeCOVID-19.
Sekureva kwevakuru vekushanya muIsrael, chirongwa ichi chinosanganisira mushambadziro wepasi rose wekushambadzira kukurudzira vashanyi vekunze kuti vashanyire Izirayeri, ichitarisa kuNew York neLondon, pamwe neUnited Arab Emirates, iyo Israel yakasaina chibvumirano chakaitika chakajairika munaGunyana 2020.
Chirongwa ichi chinosanganisirawo chirongwa chekubata zvetsika, mitambo uye zviitiko zvevaraidzo muIsrael kusimudzira kushanya kune vangangove vashanyi vekunze.
Kutangazve kwendege dzenyika dzese kuenda kumaodzanyemba kweGungwa Dzvuku nzvimbo yekutandarira yeguta re Eilat iri zvakare chikamu chehurongwa hwekushanya pakuvaka chirongwa.
Mwedzi wapera, zviremera zveIsrael zvakazivisa kuti nyika ichabvumidza majekiseni evashanyi mapoka kupinda muIsrael kutanga kubva Chivabvu 23.
Sekureva kweIsrael Central Bureau ye Statistics, iyo coronavirus denda yakatungamira kudonha kwe98.5 muzana muvashanyi vekunze vanosvika kuIsrael mukati memwedzi miviri yekutanga ya2021.
Vashanyi vanosvika 9,900 chete vakashanyira Israel muna Ndira-Kukadzi wa2021, nepo nhamba yaive 652,400 munguva imwechete ya2020, padambudziko redambudziko risati rasvika munyika.
Sekureva kweGurukota rezveKushanya kuIsrael Orit Farkash-Hacohen, chirongwa ichi chinoshanda seinjini yekukudziridza indasitiri yezvekushanya pamwe nehupfumi hweIsrael nenzira yakatarisika uye yakaenzana.
"Iyi inguva yedu kushandisa mukana wakakura weIsrael senzvimbo inochengetedzwa noutano, uye kuishandisa kuti tibatsirwe nehomwe yedu isina chinhu uye neindasitiri yekushanya, inosanganisira mazana ezviuru zvevashandi," akadaro Gurukota.